Marble waMosesi - Morningstar Stone Co, Ltd.
Raw Material Kusarudza
Iyi nhanho yakakosha uye yakakosha kune ese matanho anotevera. Matombo emabwe machubhu uye matombo akaparadzirwa zvakagadzirwa zvisizvo izvo zvakagadzirira kugadziriswa. Kusarudzwa kwezvinhu kunoda ruzivo rwakarongeka rwevanyori uye mashandisiro uye pfungwa yakagadzirira yekudzidza chero chinhu chitsva. Kuongorora kwakadzama kweiyo mbishi kunosanganisira: kuyera kurekodha & kutaridzika kwechitarisiko kutarisa. Maitiro ekusarudza chete anoitwa nemazvo, chigadzirwa chekupedzisira chinogona kuburitsa kukosha kwayo uye kukosha kwekushandisa. Yedu yekutenga timu, ichitevera tsika yekambani yekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro chete, ine hunyanzvi mukutsvaga nekutenga zvemhando yepamusoro zvinhu. ▼
Kutsanangurwa kwechitoro-kudhirowa / dhizaini
Chikwata chine hunyanzvi chinogona kushandisa mhando dzakasiyana dzekupenda software neruzivo rwekugadzira rwunotisiyanisa nevamwe vazhinji vanokwikwidza. Isu takagara takagadzirira kupa mamwe akagadziridzwa mhinduro kune chero nyowani dhizaini uye mazano. ▼
Zvese zvigadzirwa zvakapedzwa zvinofanirwa kuita pre-kuungana usati wasiya zvigadzirwa zvekugadzira, kubva kune akareruka akacheka-kusvika-saizi mapaneru kune CNC akavezwa mapatani uye emvura-jeti mapatani. Maitiro aya anowanzo kutaurwa seoma-rara. Iyo chaiyo yakaoma-yekurara inoitwa munzvimbo yakavhurika uye isina chinhu ine yakapfava cushion fiber jira pasi uye yakanaka mwenje mamiriro. Vashandi vedu vanoisa pasi mapedzero echigadzirwa pamapuraneti zvichienderana nekutora, izvo zvatiri kukwanisa kuongorora:
1) kana iro ruvara rwakaenderana senzvimbo kana nzvimbo;
2) kana machena akashandiswa kune imwe nharaunda aine maitiro mamwe chete, kune dombo rine tsinga, izvi zvichatibatsira kutarisa kana iyo vein direction yakaboorwa kana kuenderera;
3) kana paine chero kutsemuka uye kumucheto kupaza zvidimbu kuti zvigadziriswe kana kutsiviwa;
4) kana paine chero zvidimbu zvine hurema: maburi, mahombe matema mavara, yero yekuzadza iyo inoda kutsiviwa. Mushure mokunge mapaneru ese atariswa uye akanyorwa. Tichatanga iyo kurongedza maitiro. ▼
Isu takarongedza kurongedza chikamu. Tiine stock yenguva dzose yehuni uye plywood bhodhi mufekitori yedu, isu tinokwanisa kugadzirisa kurongedza kwemhando yega yega yezvigadzirwa, zvingave zvakajairwa kana zvisingaenderane. Vashandi vehunyanzvi vanogadzira kurongedza kwechigadzirwa chimwe nechimwe nekufunga: kurema kurema kwekutakura kwega kwega; kuve anti-skid, anti-kudhumhana & kushamiswa, isina mvura. Kurongedza kwakachengeteka uye kwehunyanzvi chivimbiso chekuchengetedzwa kwakachengeteka kwechigadzirwa chakapedzwa kune vatengi. ▼